Mudara raTinashe Muchuri: January 2017
Muchecheni uri kufurura maruva. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 3 Ndira 2017
Munzvirumombe wave pakuita michero. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 3 Ndira 2017
Nevanji akarembera pamupfura wave nemapfura. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri 3 Ndira 2017
Mutsambatsi. Bango Village kwaMurewa. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 31 Zvita 2016
Musambwarambwambwa uri pakufurura maruva. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri 3Ndira 2017
Muchechetu kana kuti mutsingubvu uri pakufurura maruva. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri 3Ndira 2017
Musosoti wave nemichero yaibva. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 3 Ndira 2017